Sharapova ရှာရာဗိုဘာ သတို့သား Sasha စရှာ ရဲ့ ဒေါသသံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » Sharapova ရှာရာဗိုဘာ သတို့သား Sasha စရှာ ရဲ့ ဒေါသသံ
Sharapova ရှာရာဗိုဘာ သတို့သား Sasha စရှာ ရဲ့ ဒေါသသံ
Posted by Kyaemon on Jun 11, 2012 in Aha! Jokes, Satire, Celebrity, Entertainment, Photography, Sports & Recreation | 15 comments
Sasha Sharpova Tennis
အူး ကြောင် ကြီး အတွက် ဟာသ လက်ဆောင် လေး ပါ
ကျနော်က Lakers basketball လေကာ ဝါသနာ အိုး ဖြစ်လို့
တချိန်တုန်းက Lakers လေကာမှာကစားဘူးတဲ့
Sasha Vujacic စရှာ နဲ့ သိကျွမ်းခဲ့တာ၊
မကြာမီက Sasha စရှာ က ကျနော့ ဆီကို ဖုန်း ဆက်လာတာ၊
Turkey တူရကီ ကနေ ဆက်တာပါ၊
ကျနော် နဲ့အဆက်ပြတ်တာ ကြာ ပါပြီ၊
တယောက်ယောက် က သူ့ကိုပြောလို့ဖြစ်မှာပါ၊
သူက တခါမှ စိတ်မဆိုး တတ် ပေမဲ့
ဖုန်းပေါ်ကအသံ က ခပ်မာမာ နဲ့ဒေါသ သံတွေနှော နေတာ၊
ကျနော့ကိုစိတ်ဆိုးနေသလား တောင် အောက်မေ့ရတာ၊
သူ။ ခင်ဗျားတို့ရွာထဲမှာ ကြောင်ကြီး တ ညောင်ရှိတယ်မဟုတ်လား?
ကျနော်။ ရှိပါတယ် Sasha စရှာ ရယ်၊ဘာကိတ်?
သူ။ သူ့အကြောင်းသိတယ် မဟုတ်လား?
ရွာမှာ တညောင်ညောင် နဲ့
စာမေးပွဲ အတွက်စာဘတ် ဘို့ကတဘက်၊
သူ” မိတ်လိုက်နေတာ” ကတဘက် ပေါ့လေ၊
ဒါ ကြောင် တို့ရဲ့သဘာဝပါ၊
သူ။ ဟ ငါတို့ Turkey တူရကီ မှာလဲ
သူ့ကြောင့် ငါလဲ ညည မအိပ်နိုင် ဖြစ်နေတာ၊
ကျနော်။ ဪ တော်စမ်းပါ သူငယ်ချင်းရာ၊
သူ။ သူက ငါ့ သတို့သမီးလောင်း
Sharapova ရှာရာဗိုဘာ ကို
သူ့ရီးစားလိုလို လာပြီး ၆ကြွား ၆ ကြွား လုပ်နေတာ
သူ။ ငါ့ရီးစား က ၆ ပြစ်ကင်း သဲလဲစင်၊
နတ်သမီး တမျှ လှထိပ်ခေါင်တင်ဖြစ်လို့
ကြော်ငြာသမား တွေဆီက တင် နှစ်စဉ်
ယူအက်စ် $ ၁၈ သန်း မှန်မှန်ရနေတာ၊
ဒီ ငကြောင် ကြောင့် နံမယ် အပျက် မခံ နိုင်တာ၊
လာလာပြီး” မြှော့ ” လို အချောင်တွယ်ကပ်နေတာ
ကပ်ဖားယပ်ဖား လုပ်တာကို ငါက သည်းမခံနိုင်တော့တာ၊
တယ်၊ ငါ လ ကွီး ဆိုမှ၊ မတန်မရာ၊
ကျနော်။ စိတ်လျှော့ စိတ်လျှော့၊
သူက မယား နဲ့ သားသမီး နဲ့ပါ၊
သူက စိတ်တော့ သိပ်မနှံ့တာအမှန်ပါ၊
သူ့စကား ကိုအတည်မယူပါနဲ့ Sasha စရှာ ရာ
သူ။ ဘယ်ကဟုတ်မှာလဲ သူငယ်ချင်း၊
ငါခု ကစားနေတဲ့ Turkey တူရကီ နိုင်ငံမှာဆိုရင်
ခဲလုံးနဲ့ပစ်ပြီး သေဒဏ်စီရင် တာ၊
ကျနော်။ သူငယ်ချင်း၊ ကဲ ဟုတ်ပြီ၊
သူ။ ကြောင်ကြီး ကိုပြောလိုက်စမ်းပါ
“ကြာကူလီ” တွေ အလိုမရှိ မီးပွင့်သွားမယ်၊
ဒါနဲ့ဘဲ သူငယ်ချင်း Sasha စရှာ က
နောက်ဆုံး ဖုန်းမချခင် ကြိမ်းဝါးသွားတာ၊
ကဲကဲ အူး ကြောင်ကြီး ခင်ဗျာ၊
သူများသားမယား ကို မနောကံ ဖြစ်ဖြစ် မပြစ်မှား ပါစေနဲ့၊
အူယား တတ်တယ် မဟုတ်ပါလားဗျား၊
Sharapova ရှာရာဗိုဘာ နဲ့ အဆက် Sasha စရှာ အကြောင်း အောက်နားတွင် ဘတ်ရှုပါရန်
သူတို့က ၂၀၀၉ ကထဲက တွဲခဲ့တာ၊
တစ်နှစ်အကြာမှာ စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းကြတာ၂ နှစ်ရှိပြီး
လာမဲ့ နိုဝင်ဘာလမှာ လက်ထပ် တော့မှာ၊
Maria Sharapova hot news: boyfriend Sasha Vujacic becomes fiance | Maria Sharapova
October 22, 2010 | In Maria Sharapova |
July 9, 2010 | In Maria Sharapova |
Maria Sharapova with boyfriend Sasha Vujacic in Udine, Italy | Maria Sharapova
Although I’ve been following the relationship of tennis superstar Maria Sharapova and LA Lakers guard Sasha Vujacic since the very beginning, I have to say that headlines about their engagement came as quite ofashock. The news is most likely true, as many credible sources are reporting it. However, Sharapova’s official website is still saying nothing about it.
Here’s what Vujacic said Thursday night before the Lakers’ exhibition game against the Golden State Warriors:
We are engaged and are both really happy. It’s good and now we can focus on other things.
The story is that Vujacic met Sharapovaayear ago atafriend’s barbecue and now he decided to propose to her on the anniversary of the day they first met. Sharapova is 23 years old and Vujacic is 26.
Here’salittle retrospective of Maria and Sasha together:
couple first seen holding hands – last November
spotted relaxing in Los Angeles – in February
Maria brought Sasha with her to Indian Wells
strolling the streets of Udine together – in July.
Maria Sharapova spotted with boyfriend Sasha Vujacic | Maria Sharapova
Maria Sharapova brings boyfriend Sasha Vujacic to Indian Wells | BNP Paribas Open
Maria Sharapova Photos – Maria Sharapova and Sasha Vujacic TakeaWalk – Zimbio
sasha-vujacic-sitting-portrait « LakersBR – O site de noticias do Los Angeles Lakers no Brasil
HoopsHype – Interviews – Sasha Vujacic: “Kobe made an effort to sendamessage to the Jazz”
Sasha Vujačić – Wikipedia, the free encyclopedia
Aleksandar “Sasha” Vujačić (Serbian Cyrillic: Александар »Саша« Вујачић, Slovene: Saša Vujačič, rendered in English as Sasha Vujacic; born March 8, 1984) isaSlovenian basketball player who has played in Italy, the United States (for the Los Angeles Lakers), and more recently for Anadolu Efes in Turkey. Though he has played the point guard position in Europe, he found more playing time at the shooting guard spot while in the Lakers’ triangle offense.
Vujačić was born in Maribor, present-day Slovenia, toaSerbian father and Slovenian mother. His father wasaSerbian basketball coach, while his mother wasaSlovenian volleyball player. His mother was playing volleyball foratop Yugoslav women’s club, Branik Maribor, but quit her career at the age of 19 when she got pregnant with Vujačić. His parents divorced when he was 6, and he lived with his mother and soon afterwards with his stepfather. He has two siblings,asister named Nina, andabrother named Aljoša. In addition to basketball, he enjoys playing volleyball, tennis, and football.
He is engaged to professional tennis player Maria Sharapova.
Maria Yuryevna Sharapova (Russian: Мария Юрьевна Шарапова [mɐˈrʲijə ˈjurʲjɪvnə ʂɐˈrapəvə] ( listen); born April 19, 1987) isaRussian professional tennis player and former world no. 1. A United States resident since 1994, Sharapova has won 26 WTA singles titles, including three Grand Slam singles titles at the 2004 Wimbledon, 2006 US Open and 2008 Australian Open. She has also won the year-end WTA Tour Championships in 2004. The Women’s Tennis Association has ranked Sharapova world no. 1 in singles on four separate occasions. She became the world no. 1 for the first time on August 22, 2005, and last regained the ranking for the fourth time on May 19, 2008. As of May 28, 2012, Sharapova is ranked world no. 2. She has been in six Grand Slam finals with the final record 3–3.
Sharapova’s 2007 season was plagued withachronic shoulder injury and saw her ranking fall out of the top5for the first time in two years. She won her third Grand Slam at the 2008 Australian Open, defeating Henin in the quarterfinals and Ana Ivanović in the final. After reclaiming the no. 1 ranking in May 2008, Sharapova’s shoulder problems re-surfaced, requiring surgery in October and forcing her out of the game for 10 months. Sharapova returned in May 2009 and was ranked no. 126 in the world due to her extensive lay-off. Since her comeback, Sharapova has won seven singles titles (bringing her career total to 26) and improved her ranking to no.2in the world.
Sharapova has been featured inanumber of modeling assignments, includingafeature in Sports Illustrated Swimsuit Issue. She has been featured in many advertisements, including for Nike, Prince and Canon, and is the face of several fashion houses, most notably Cole Haan. Sharapova was the most searched-for athlete on Yahoo! in 2005 and 2008. Since February 2007, she has beenaUnited Nations Development Programme Goodwill Ambassador, concerned specifically with the Chernobyl Recovery and Development Programme. In June 2011, she was named one of the “30 Legends of Women’s Tennis: Past, Present and Future” by Time.
Sharapova’s tennis success and appearance have enabled her to secure commercial endorsements that greatly exceed the value of her tournament winnings. In March 2006, Forbes magazine listed her as the highest-paid female athlete in the world, with annual earnings of over US $18 million, the majority of which was from endorsements and sponsorships. She has topped that list every year since, even after her 2007 shoulder injury. In April 2005, People named her one of the 50 most beautiful celebrities in the world. In 2006, Maxim ranked Sharapova the hottest athlete in the world for the fourth consecutive year. She posed inasix-page bikini photoshoot spread in the 2006 Valentine’s Day issue of the Sports Illustrated Swimsuit Issue, alongside 25 supermodels. Inapoll run by Britain’s FHM magazine, she was voted the seventh most eligible bachelorette, based on both “wealth and looks.”
အူးကြောင်တော့ ဟတ်တွေကွဲပြီး နှာတွေရွှဲရော့မယ်ပေါ့လား ။ ဒီတစ်ခါ ရိုက်ချက်ပြင်းပြီဗျို့။
ဦးကြောင်ကြီးတော့ အသဲ ဟက်တက်ကွဲနေလောက်ပြီ..
အောင်ကြူးတော့ ကဘာကျော်တော့မယ်။ (အထင်မှားခံရတာကိုက ကဘာကျော် တင်းနစ်မယ်ဆိုတော့လေ)။ Congratulation ပါ အုကြောင်
အဲဒါ ကြောင်ကြီး ပုံ မဟုတ်ဘူးလား။
မဟုတ်ရင်တော့ သတင်း ဆိုတာ ဖော်သူရှိ ရင် အမှန်တရား ဆိုတာ ပန်းကန်ပြား နဲ့ ဖုံးထားလို့မရ တာကြောင့် သတင်းမှန် သိရင် ဖော်ကြပါ။
သို့ပင်သို့ငြား – မှန်မမှန် ခွဲခြားနိုင်ဖို့ တော့ လိုကြမယ်။
ကကြေးမုံ ကိုလဲ ကျေးဇူးပါ။ သတိတော့ နဲနဲထားနေပေတော့။
ဆိုတော့ကာ ဒါကို ဖြေရှင်းဖို့
ကကြောင်ရေ ဥာဏ်နီဥာဏ်နက် ဥာဏ်အရောင်ပေါင်းစုံ ထုတ်ပေတော့။ ;-)
ကျေးမုံဂျီးဒို့ ဂဒေါ့ လုပ်ချထလိုက်ပြန်ဘီ..
အူးကြောင်ဂျီးတို့ ဂဒေါ့ နားကားဒါဘဲ..အဟေး.အဟေး…
ဟိုက် နာ့ပုံ ဘူတင်ဒါဒုန်းကွ
ပရိုက်ဗိတ်ဆီနော်…နဂိုဂမှ အူးကျောင်ဏဲ့ ယန်မဖျစ်ခြင်ပါဗူး စိုဏေမှ
ပသာနာဘဲ နာ့ဂို လူဒွေ တိဂုန်ဘီ
(မှပ်ခြက် မျန်မာဇာ သင်ဒုန်းမို့ ရေးဒတ်သလို ရေးလိုက်သီ)
ဟာကွာ… ရှာလာပိုဗာတွဲတဲ့ ငနဲ့ကလဲ..
ကြေးမုံရိုက်ချက် ကြောင်အသက်ထွက် ဟိဟိ တစ်လုံးပဲပစ်သွင်းလိုက်တာနော် ဟိုက